အဝလွန်ခြင်းဟာ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိကြရဲ့လား ? – YANGON STYLE
အဝလွန်ခြင်းဟာ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိကြရဲ့လား ?
ချစ်တို့ရေ ၂၀၂၀ မှာ အိမ်မှာနေရတဲ့ ကာလနဲ့ Work from home တို့ကသာ ပိုများနေတဲ့အတွက် အိပ်ချိန်စားချိန်တွေ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကမောက်ကမတွေဖြစ်တာကို လူတိုင်းနီးပါးကြုံတွေ့နေရပါတယ်. သရေစာတွေပိုစာမိတာကြောင့် ပိုဝလာတယ်လိုထင်ရပေမယ့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါသွားခြင်းကလည်း တရားခံအဖြစ်ကို ပါဝင်နေပါတယ်။ နောက်ထက် အသံတိတ်တရာခံကတော့ အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာမှု အသစ်အရ ညအချိန်မတော် မုန့်ပဲသရေစာ စားသုံးခြင်းဟာ အဝလွန်ခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံမဟုတ်ဘဲ အိပ်ချိန်လုံလောက်စွာ မရှိခြင်းက အဝလွန်ခြင်းရဲ့ တရားခံထဲမှာ ပါဝင်နေတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းကို စိတ်အားငယ်တဲ့အတွက်လည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာကာ အိပ်မပျော်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခြင်းဟာ အစာချေဖျက်မှုကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆီသိုလှောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တက်စေတာပါ။
ဒါကြောင့် ပိန်သွယ်လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် Diet Meal Plan စားသုံးခြင်း၊ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းတို့နဲ့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ အိပ်ရေးဝအောင် အိပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီး ပါတယ်။ ကျန်းမာသွယ်လှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် မျှတတဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၊ အိပ်ချိန် ၈ နာရီပြည့်ဝစွာ အိပ်စက်ခြင်းတို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အိပ်ချိန်မမှန် ပြည့်ဝစွာ မအိပ်စက်ပါက အဝလွန်ခြင်းအပြင်
ဝက်ခြံနှင့် အသားအရေဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လှပ ကျန်းမာဖို့ဆို စိတ်ဖိစီးမှုများကိုလျော့ချပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်ဖို့ကို အကြံပေးလိုက်တယ်နော်။